China Aviator Sunglass yeVarume 100% UV Kudzivirira Goggle Alloy Frame Kugadzira uye Fekitori | Baolai
Aviator Sunglass yeVarume 100% UV Dziviriro Goggle Alloy Chimiro
1. UV400 yakatarwa magirazi ezuva akakosha kuti udzivirire maziso ako kubva kukuvara kwenguva refu kwe UV uye kuchengeta maziso ako aine hutano paunobuda.
2. zvakasimbiswa hinji hinji izvo zvinogara zvakakwana kwenguva yakareba uchishandisa. Ivo akakodzera chero mamiriro ekunze uye mamiriro ekunze.
3. sekufamba, kubata hove, kutyaira, kutenga, kufamba, kusvetuka muchikepe, kutora mapikicha, uye inokodzera semuchina wepamusoro wemafashoni uye zvekupfeka zvezuva nezuva muchirimo, zhizha, matsutso uye nguva yechando. Icho zvakare chipo chakarongedzwa chakagadzirira, ichiita icho chinoshamisa asi chinoshanda chipo zano kune shamwari nemhuri!
Chinhu icho kwete. 10171-P8590
Saizi 19X10X12 masendimita
-isina simbi: yakasimba, isingadhuri, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza
-kugadzikana simbi yemhino
-Lens zvinhu: PC
-REVO lens. Revo lenzi ari kukwenya uye kukanganisa kusagadzikana uye kunyengedza kwakakwana kujeka kwechiono
-UV400 KUDZIVIRIRA: inokuvadza UV mwaranzi yakavharwa, chete anobatsira anoonekwa mwaranzi inopinda mumaziso ako
Zvimiro uye mabhenefiti:
-Deredza maficha epasi
-Durable uye lightweight furemu
-Scratch inodzivirira lens
-UV lens yekudzivirira
-Fashoni uye dhizaini dhizaini inotonhorera yemagirazi evarume nevakadzi
Kuti udzivise kukuvara, usambogeza magirazi ezvekufuka nezvipfeko, uyezve dzivisa kushandisa sipo yemumba. Kuchenesa magirazi ako ezuva, shandisa mvura nesipo kudzivirira mhando dzese dzenyonganiso kana doro. Shandisa chete zvekutanga zvishongedzo uye apare zvikamu
1 pc / opp bhegi
20 pcs / bhokisi remukati
500 hrs / ctn
Tinotakura mukati memazuva makumi maviri nemashanu ebhizinesi mazuva ekubhadhara, kazhinji nekukurumidza
Samples dzakatumirwa mukati memazuva manomwe
Kugutsikana kwevatengi kwakakosha kwatiri!
Kana iwe uine chero dambudziko neodha yako, ndapota taura nesu uye tichaita zvatinogona kuti iwe ugutsikane, ndapota usasiya mhinduro yakaipa tisati tagadzirisa dambudziko rako.
Isu tinovimbisa kuti nyaya yako ichagadziriswa nekukurumidza.
Chero bedzi iwe uchifara nekutenga kwako, ndapota tisiye mhinduro yakanaka.
Mhinduro yako yakakosha kwazvo kwatiri ine chekuita nekutsvaga kwedu uye vatengi venguva yemberi.
Isu tinosiya mhinduro yakanaka kwauri mukudzoka otomatiki kana tangogamuchira yako mhinduro.
Pashure: mitambo Sunglasses inomhanya hove gorofu kuchovha Polarized Sports magirazi ezuva PC hafu furemu 100% UV400 Kudzivirirwa
Zvadaro: Polarized Sunglasses dzeVarume neVakadzi Zuva magirazi Ruvara rweMirror Lens 100% UV Kuvhara
Aviator Magirazi Mens
Aviator Sunglasses Kune Varume
Aviators Kune Varume
Nhema Sunglass Mens
Yakakudziridzwa Magirazi egirazi Kune Varume
Rimless Sunglass Mens
Shades Kune Varume
Materu egirazi Mens
Stylish Sunglass YeVarume
Magirazi egirazi Mens
Yakavhenekerwa Magirazi echiso eVarume neVakadzi Zuva magirazi ...